Ny Fametrahana Jiro
Ny Fametrahana Jiro Linear Flora dia nahazo aingam-panahy avy amin'ny isa "telo" avy amin'ny bougainvillea, ny voninkazo ao amin'ny County Pingtung. Ankoatry ny takelaka bougainvillea telo hita avy any ambanin'ny sangan'asa, ny fiovaovan'ny karazany sy ny telo ao anatiny dia azo jerena amin'ny endrika samihafa. Ho fankalazana ny fankalazana ny faha-30 taonan'i Taiwan Lantern Festival, ilay mpanaingo endrika haino aman-jiro Ray Teng Pai dia nasain'ny Departemantan'ny kolontsaina ao amin'ny County Pingtung hamorona jiro tsy ara-dalàna, ny fampifangaroana endrika sy teknolojia tokana, handefasana hafatra hanova ny lova an'ny festival ary mampifandray azy amin'ny ho avy.
Jiro Ambient 25 Nano dia fitaovana maivana maivana hilazana ny ephemeral sy ny maha-maharitra, ny fahaterahana ary ny fahafatesana. Niara-niasa tamin'ny Lohataona Loharano Loharano Rindrambaona CO, LTD, izay fahitana azy dia manangana kitapom-panodinam-baravarana fitaratra ho an'ny hoavy maharitra, 25 nisafidy Nano ny banga somary marefo ho takelaka mifanohitra amin'ny fitaratra matevina mba hampitana ilay hevitra. Ao amin'ilay zavamaneno dia mihamaintsaina maivana amin'ny alàlan'ny tsingerin'ny fiainana, mamelatra ny loko tahaka ny zoro sy aloka amin'ny tontolo iainana, mamorona rivo-piainana nofinofy manodidina ny mpampiasa.
Ny Jiro Amin'ny Asa
Ny Jiro Amin'ny Asa Ny teknika fantsona fantsona an'ny Linear Light dia ampiasaina betsaka amin'ny famokarana faritra fiara. Ny tsipika miantehitra amin'ny tsiranoka dia tsikaritra amin'ny alàlan'ny fifehezana marimarina an'ny mpanamboatra Taiwanese, noho izany dia manana ny fitaovana faran'izay kely indrindra hanamboarana ny fantsom-pahazavana Linear Light, lanja ary portable; mety hampamirapiratra ny atiny maoderina. Izy io dia ampiharina amn'ny flicker maimaim-poana vita amin'ny flicker, miaraka amin'ny fahatsiarovana izay mihodina amin'ny haavon'ilay teo aloha. Linear Task dia narafitra natambatr'ireo mpampiasa, namboarina fitaovana tsy misy poizina ary tonga miaraka amin'ny fonosana fisaka; manao izay tsara indrindra hampihenana ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana.
Ny Sehatr'asa Namboarina ho an'ny birao malalaka, sekoly ary oniversite i Dava izay zava-dehibe ny dingana fiasa mangina sy mifantoka. Ny maoderina hampihenana ny fikorontanan'ny voakaly sy amin'ny sary. Noho ny endriny miendrika sela dia mahomby ny habaka ary mamela safidy isan-karazany fifadian-kanina. Ny fitaovana ao Dava dia WPC sy ny volon'ondry mahatsapa, samy azo alaina avokoa. Plugin-plug dia manamboatra ny rindrina roa amin'ny takelaka ary manasongadina ny fahatsorana amin'ny famokarana sy ny fikarakarana.
Zoma 16 Jolay 2021
Fanaka Manan-Tsaina Hello Wood dia namorona tsipika fanaka ivelan'ny trano miaraka amin'ireo fiasa maranitra ho an'ny sehatry ny vondrom-piarahamonina. Nodinihina indray ny karazan'ireo fanaka ho an'ny besinimaro, namolavola fametrahana hita maso sy fampiasa izy ireo, izay ahitana ny jiro sy ny faritra USB, izay mitaky ny fampidirana takelaka sy batterie. Ny Snake dia endrika modular; miovaova ny singa ao amin'ny tranokala nomena. Ny Fluid Cube dia unit tsy mihetsika miaraka amin'ny tampon-fitaratra misy ny sela solar. Mino ny studio fa ny tanjon'ny famolavolana dia ny mamadika ireo lahatsoratra amin'ny fampiasana isan'andro isan'andro ho zavatra tiana.
Santander World Ny Sary Sokitra An-Tanàn-Dehibe Alahady 1 Aogositra
Oli Lovia Oliva Asabotsy 31 Jolay
Bridal Veil Ny Chandelier Zoma 30 Jolay
Ny Fametrahana Jiro Jiro Ambient Ny Jiro Amin'ny Asa Ny Sehatr'asa Trano Fonenana Fanaka Manan-Tsaina